Ninkaasi oo lagu magacaabo Cali Cumar Adeer ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa Kooxo hubeysan oo bishii August ee sannadkii 2008-dii duleedka Muqdisho ku afduubtay Saxafiyad Canadian ah iyo Sawir-qaade u dhashay Australia.
Eedeysanaha oo ay Boliska Kanada ku soo qabteen Hawlgal bishii June ee sannadkii 2015-kii ayaa mar kale ka soo muuqday Maxkamada sare ee The Ontario Superior Court oo ku taalla magaalladda Ontario ee dalkaasi.
Xeer-beegtida Maxkamadda waxay soo bandhigeen Codad la sheegay in laga duubay Eedeysanaha oo ku dalbaday Lacag Madax-furasho oo dhan 600,000 oo Dollar.
Wargeyska The Ottawa Sun ayaa qoray in Eedeysanahaasi ka mid ahaa dadkii afduubtay Saxafiyadda Amanda Lindhout iyo Sawir-qaade Nigel Brennan, kuwaasi oo muddo 15 bilood afduub loogu haystay gudaha Somalia.
Labada Saxafi ayaa la sii daayey, kadib, markii Afduubayaash la siiyey lacag dhan 600,000 oo Dollar oo loo sii marsiiyey Shirkad British ah oo u qaabilsan Arrimaha Ammaanka.
Ugu yaraan 29 Wicitaan ayey Boliska Kanada sheegeen inay ka duubeen Eedeysanaha , ka hor inta aan Suxufiyiintaasi la sii daynin bishii November 26-dii ee sannadkii 2009-kii.
Dhinaca kale, Dacwad-oogaha Maxkamadda Federalka Kanada, Croft Michaelson ayaa sheegay in Eedeysanaha uu dhowr jeer meel fog ka soo wacay Saxafiyadda Hooyadeeda oo lagu magacbo Lorinda Stewart..
Croft Michaelson waxa uu intaasi ku dray inuusan Eedeysanaha xaq u lahayn inuusan xaq u lahayn inuu shaqsi ahaan rajeeyo Lacgo Madax-furasho ah, waa sida uu hadalka u dhigay.
Eedeysanaha ayaa iska difaacay Eedeymaha lagu soo oogay, waxayna Maxkamaddu sheegtay in Dacwadda dib loo dhegeysan doono maalia Isniinta ee soo socota.